Waa Maxay The Dukaamada Best guridda In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa Maxay The Dukaamada Best guridda In Europe
Marka in search of dukaamada ugu fiican guridda in Europe, aad tahay ma aha oo kaliya ugu jirnaa kuwa xabbadood Xisbiyada Mucaaradku. sidoo kale waxaad ka qaadan safar hoos haadka xusuusta iyo sahaminta taariikhda. dukaanka A guridda ka dhigan tahay fashion ah museum, muujinaysaa dhaqanka iyo taariikhda magaalo ee. Waxaan jecel sahaminta magaalo cusub oo xiiso leh tareen, iyo helidda gaarka ah iyo dhar Xisbiyada Mucaaradku waa hab xiiso leh of waxa ay qabanayaan. Halkan waxa ku jira bakhaaradeeda Best guridda Yurub iyo sida ay halkaas ka heli by tareenka.
bakhaaradeeda Best guridda in Europe Paris: Free P Star
Sida caasimada labaad ee ugu booqday of Europe, Paris aad ayuu isugu xidhan yahay lana heli karo. Socotada heli kartaa in Paris si fudud tareen ka yimi dalalka dariska ah sida ugu Belgium, Spain, Holland, UK, Germany, kuwo kale iyadoo la isticmaalayo SaveATrain.
Marka aad hopped off tareenka, our stop koowaad waxa ay noqonaysaa in Bilaash P Star. Haddii, nala mid ah, aad tahay lover ah ee wax walba Retro, markaas ma themadaxweyne caasimada fashion of Europe noqon doonaa dhamaystiran oo aan joogsi ah u yaab badan qasan Free P Star. Si ka duwan dukaamada kale guridda ee Paris, FREE'P'STAR ma ma ahan oo keliya iska iibiso dharka gacanta labaad ee French. Waxay sidoo kale oo mararka qaarkood iska iibiso dharka gacanta labaad-ka Maraykanka xitaa curiyay cusub ee ka soo xidheen dhar gaboobay dhigay. Waxaa jira kala duwan oo badan oo dhar guridda aad tartan jaban iyo accessories ka 70s ee’ midig ilaa qarnigii 21aad.
Buuxdhaafsheen mesh a of GEMS guridda ragga iyo dumarka, dukaanka waa kama dambaysta tag-to dadka dukaanada gacan labaadka ah rug cadaa ah diyaar u yihiin in ay qodo oo qoto dheer si ay u helaan helaa ay moodada.
Dijon tikidhada tareenka ee Paris
Qiimaha tikidhada tareenka ee Paris
Lille ilaa tikidhada tareenka ee Paris
Socdaallada tikidhada tareenka ee Paris
bakhaaradeeda Best guridda ee Berlin: gabya qudunquuto
Waxaad awoodi kartaa gaari Berlin ka jiho kasta adigoo isticmaalaya InterCityExpress soonkii, Intercity, EuroCity, iyo Tareenadu InterRegio. The saldhig cusub dhexe Berlin Hauptbahnhof qalbiga Berlin la furay 2006 iyo fikradda cusub ee tareenka iyo saldhigyada ee Berlin ayaa lagu rakibay. All tareenada waxaa sidoo kale ku xiran ee nidaamka gaadiidka dadweynaha, si aad jidka samayntoodu innaba waa super fudud, oo la awoodi karo haddii aad isticmaalayso Save A Tareen dabcan.
Iyadoo Paris waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah meelaha ugu soo booqday in Europe, waxaan qabaa Berlin waxay hoy u tahay qaar ka mid ah qaab swankiest waddooyinka ee Europe. Waa la yaab ma ka dibna, in Berlin waxaa xoog leh qaar ka mid ah bakhaaradeeda Best guridda in Europe. Mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad gaarka ah isagoo gabya qudunquuto. Waxay ku taallaa degmada arty ah Neukolln ee marsada gacan labaad isku daraa ay ururinta dhowba dhar guridda la cafe a in takhasusay cunto vegan. Waxaan dareemayaa this waxay siinaysaa laayeen dhab ah iyo sababta dheeraad ah inuu sii joogo iyo dukaanka, iyo cuno! Waxay leedahay la Midyahay Dhalanteed qaybo naqshadeeye ka 70s ee’ in 90s ee’ iyo sidoo kale kuula dhaqmo handmade dhadhan fiican, gabya qudunquuto waa guusha ee dhammaan fashionistas foodie!
Bremen ilaa tikidhada tareenka Berlin
Leipzig ilaa tikidhada tareenka ee Berlin
Hanover tikidhada tareenka ee Berlin
Hamburg ilaa tikidhada tareenka ee Berlin
bakhaaradeeda Best guridda ee Amsterdam: jiinyeer
Ha lagu siri by dareenkaa u horeeyaana. dukaan wuxuu eegayaa yar ka baxsan, laakiin marka aad ku socdaan iyada oo ay albaabbadu, aad arki doonaa waayo-aragnimo sixir si degdeg ah. Waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah dukaamada gacan labaad ee ugu weyn Amsterdam soo bandhigtay laba dabaq cavernous sarreysa ka buuxa dharka guridda, kala heer mezzanine ah ka go'an in ay accessories.
dukaanka mar walba restocks oo xajiya waxyaalaha cusub oo cusub. Inkasta oo ay doorashada la-iyo-socodka sbarmuutada ee fashion casriga ah guuro, jiinyeer had iyo jeer ku hayaa armaajo oo ay dhaansan la items canbaha sida jiinis, jaakadaha ciidanka, iyo funaanado geliayay.
Brussels ilaa tikidhada tareenka ee Amsterdam
London ilaa tikidhada tareenka ee Amsterdam
Tikidka tigidhada tareenka ee magaalada Amsterdam
Paris ilaa tigidhada tareenka ee Amsterdam
bakhaaradeeda Best guridda ee Barcelona: iyo Swing
Taagan baxay sida caasimada dhaqan ee Catalonia, Barcelona ayaa ah wax-uqabso iyo dareenka weli burjiga. Bixiya dhismayaasha casriga ah, burisay Dr Makumbe, cunnada hal abuur leh, iyo cawayska guuxayaan. Barcelona waa mid ka mid ah hogaanka Meelaha safarka Yurub. Oo tan aynu doonayno inaynu galay Summer, waxay ku saabsan tahay si aad u hesho super mashquul. Sidaa darteed hubso inaad jartaan tikidhka tareenka aad Early on SaveATrain. Ma aha oo kaliya waa Barcelona guriga in qaar ka mid ah bakhaaradeeda Best guridda in Europe, laakiin waxa ay sidoo kale mid ka mid ah Summer ugu caansan fasaxa meelaha. In u dhexeeya cunaya delicious Tapas iyo oolista on mid ka mid ah dad badan oo ku xeebaha, qaataan waqti si ay u booqdaan iyo Swing. Tani Olimpico guridda qurux badan waxa uu ku yaalaa meesha ku dhashay rayn. Buuxiyey dhar naqshadeeye gacanta lagu soo xulay, bacaha, dahabka iyo kabaha, kaydkan snazzy kaydka labbiska guridda ka toban sano kasta oo qarnigii 20-.
Haddii raaxada waa wax, ka dibna aad yimaadeen meeshii xaq u. iyo Swing qoreysa xabbadood Retro ka Chanel, Yves Saint Laurent, iyo Christian Dior, taas oo ka dhigaysa meel ku fiican si ay u dukaameystaan ​​haddii aad rabto in aad isku durto qaar ka mid ah pizzazz aad dharka dhawri jiray xilli ciyaareedkan.
Geneva: VET 'Shop The
Geneva waa in ay meel u gaar ah oo aragti heer sare ah gutaa-Blanc mahad magaalada riyo. peak ugu sareeya ee Europe. The baadiyaha, meesha ugu fiican ee hawlaha dibadda, waa daqiiqado yar ka fog magaalada ka. Geneva is the best starting point to visit the rest of Switzerland inay xidhiidh fiican dadweynaha gaadiidka tareen mahad.
Waxaa laga yaabaa inaad la fikirka .... Taasi info fiican oo dhan, laakiin meesha waa inuu dharkiisa ee, gabadh?! waan ogahay, Geneva laga yaabaa in aan la garan sida magaalo thrifty, laakiin taasi waa sababta aad noo helay. Si aad u haadiyo baxay GEMS qarsoon waayo, waxaad this jeclaan. Waayo, lacag caddaan ah ku safra dhagan raadinaya in ay ciyaarta guridda oo aan haysan si ay nafta iska iibiso, VET 'Shop The in Geneva inuu yahay jid horsocod!
Qayb ka mid ah ururka Laanqayrta Cas Swiss ah, dukaanka guridda waa fashion dheeraad ah wajahan badan dhigooda ay dukaan Sadaqo. Waxaa si gaar ah iibiya dharka gacanta lagu gaaray Retro ka jirta noocyada mid taariikhi ah sida Givenchy iyo Celine. Sidaas, haddii aad tahay lover ah ee fashion gacanta labaad ee anshaxa, sababo siyaasadeed ama dhaqaale, baadhid VET 'Shop The. Ma aha oo kaliya soo baxa tagaan sidii loo caawin dadka u baahan, laakiin waxa ay sidoo kale duwan oo ka soo dhaweynayaa in qiimaha samada sare ee magaalada Swiss ah!
Lyon ilaa tikidhada tareenka ee Geneva
Zurich ilaa tikidka tareenka ee Geneva
Tikidhada tareenka ee Paris iyo Geneva
Tikidka tareenka u socda Bern ilaa Geneva
Ready for a labis cusub snazzy? Keydso lacagta caddaanka ah ee dharka iyo buug la SaveATrain. No qarsoon ujrada iyo aad u hesho inay jartaan fudayd! 😎
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-vintage-stores-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa luqadaha / NL in ay / fr ama / PL oo dheeraad ah.
Guide Quick: Safrida By Tareen From Paris Si Nice
Tareenka Safarka Faransiiska, Tilmaamaha Tareenka Safarka
10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka
Tareenka Safarka Faransiiska, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Meesha ay yaalliin Matxafka Best In Europe
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe